Siri iyo Kaaliyaha Google way kala siman yihiin xagga isticmaalka adeegsadaha | Wararka IPhone
Siri iyo Kaaliyaha Google waxay ka siman yihiin isticmaalka isticmaalaha
Sidaas waxaa leh warbixin Microsoft ah oo ururinaysa xog laga helay laba sahan oo khadka tooska ah laga qaaday oo laga sameeyay dalal kala duwan oo adduunka ah: Siri iyo Kaaliyaha Google waxay kala siman yihiin xagga isticmaalka adeegsadaha, aad ayey uga sii horreeyaan Amazon Alexa kaas oo fadhiya kaalinta saddexaad, isagoo ah Cortana oo la xidhiidha kan afraad.
Xaqiiqooyinka xiisaha leh haddii aan tixgelinno in Kaaliyaha Google laga heli karo aalado iyo aalado badan oo ka badan Siri, kaaliyaha dalwaddu ku xaddidan yahay aaladaha Apple. Daraasadu waxay sidoo kale xaqiijineysaa welwelka isticmaalayaasha ee asturnaanta noocyadan caawiyeyaasha ah.
Iyada oo ku saleysan sahan la sameeyay intii lagu jiray bilihii Maarso ilaa Juun 2018, iyadoo ilaa 2000 jawaabo sax ah laga helay dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, Hindiya iyo Ustaraaliya, iyo baaritaan kale oo 5000 jawaabo ah laakiin ku kooban Mareykanka Warbixintan Microsoft waxay xaqiijinaysaa in Siri loo isticmaalo sida ugu badan ee Google Assistant, iyadoo tirooyinku gaarayaan 36%. Amazon Alexa waa 25% kaalinta saddexaad, iyo Cortana, kaaliyaha Microsoft, kaliya 19%.
Maaha wax kadis ah in kaaliyeyaasha ugu adeegsiga badan ee la adeegsaday horay loogu rakibay aaladaha mobilada marka lagu daro kuwa ku hadla smart. Amazon waxay leedahay dhibaatadan, tan iyo markii loo adeegsado Alexa on iOS ama Android waa inaad soo dejiso codsigeeda. Microsoft waxay leedahay hal cilad oo dheeri ah, kuwa aad uyar oo ku hadla caqli badan ayaa ku daraya, laakiin sikastaba ha noqotee qalab kasta oo leh Windows 10 wuxuu ku darayaa Cortana, oo waxaan ka hadleynaa saldhig weyn oo adeegsadeyaal ah, taas oo ka duwan adeegsiga hooseeya.
Asturnaantu waa mid ka mid ah dhinacyada ay aadka u khuseeyaan dadka isticmaala kaaliyeyaasha dalwaddu, gaar ahaan kuwa ku hadla caqliga. In kabadan nus (52%) waxay dareemeen in xogtooda shaqsiyadeed aysan amaan aheyn aaladda noocan ah, waxayna 41% sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaqiiqda ah in sameecadaha had iyo jeer ay dhageysanayeen. Tani waa si sax ah mid ka mid ah dhinacyada ay Apple ku saleyneyso ololaheeda xayeysiinta, waxayna umuuqataa inaysan khalad ku socon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » HomePod » Siri iyo Kaaliyaha Google waxay ka siman yihiin isticmaalka isticmaalaha
HomeRun waxay ku dari doontaa toobiyeyaal iyo dhibaatooyin isbedelaya iyadoo kuxiran waqtiga maalinta